सेन्ट पीटर्सबर्गमा जैजीसँग होटलहरू
Mini होटल सिंह ब्रिज
मिनी होटल पोलिस पोस्टेन होस्टल - एक्लै यात्रा गर्नेहरूको लागि
HOTLES मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा मूल्य
आधिकारिक होटल राज्य संग्रहालय हमिनाम
<< कोठा होटेलमा तपाईले यस पीटरको वातावरण होनोट गर्नुहुन्छ: महोदय विन्डोज, पर्खालका चित्रहरू र पर्खालबर्गमा ठाडो दृश्यहरू। यो सुविधाजनक छ कि कोठाहरू दुबै एकल र परिवार छन्।
यो मिनी-होटल प्रेममा पस्न असम्भव छ: गृह सलादहरू, केवल ads कोठा, साथै बाथ्रोज र चप्पल। र ओभनको साथ एक पूर्ण भान्साको साथ पनि तपाईं खाना पकाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो यात्री पाठकहरूले यो होटेललाई 5th औं स्थानमा सेट गरे पनि, तर सम्पादकीय बोर्डलाई "हामीलाई थाहा छ" उसले अरू सबैलाई मन पराउँछ। सिफारिश गरिएको! मूल्य - 10000 रूबलबाट। कोठाको लागि (एक व्यक्तिको लागि होइन) ब्रेकफास्टको साथ! तपाईंको मितिहरू हेर्नुहोस्
तथापि, जहाँ तपाईं बसोबास गर्नुहुन्छ, वास्तविक पत्रुसले तपाईंको लागि खोलिदिनेछन्, केवल अर्को स्तरमा चढ्दा मात्र। केवल, तपाईं यस शहरको शानदार सुन्दरतामा सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई तत्काल र सबै सस्तो होटेलहरू साझेदार होटलहरूमा पुग्नु पर्छ यदि तपाईंसँग सेन्ट पीटर्सबर्गमा पहिले नै व्यस्त छन् भने "जलाउने" विशेष प्रस्तावहरू हेर्नुहोस्:
सेन्ट पीटर्सबर्ग केवल रूसमा सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक मात्र होइन, तर एक पनि भ्रमण गरिएको छ। विश्वभरिबाट पर्यटकले उनलाई रसियाको इतिहासमा डुब्न खोज्छन्, सबै प्रकारका आकर्षणहरूको दृश्यको आनन्द लिन्छन्, यस अविश्वसनीय रूसी शहरको अनुपम भावना महसुस गर्न।
सेन्ट पिटर्सबर्ग - रूसको दोस्रो ठूलो शहर फिनिश खाडीको तटमा शक्तिशाली नदीको किनारमा फैलिएको थियो। शहरमा धेरै नामहरू छन्, प्रत्येकलाई संक्षिप्तमा यसको संक्षिप्तमा यसको संक्षिप्तमा उत्तरी राजधानी, सेतो रातको शहर न्यूवा, तीन क्रान्तिको शहर हो - र यो पूर्ण सूची होईन सेन्ट पीटर्सबर्गको अनौपचारिक नामहरूको।
सेन्ट पीटर्सबर्ग रूसी शहरहरू जस्तो देखिँदैन। शहरको ऐतिहासिक भागमा बारोस्किक र नेकोलासिकवादको शैलीमा भवनहरू छन्। धेरै मन्दिर र फाइनललहरूले सहरलाई जनाउँदैनन्, तर रूसी राज्यको इतिहासमा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षणहरूको स्मृति बोक्दैनन्।
स्थान: तटबन्ध मक्काक्रोवाभाई, 600, सेन्ट पिटर्सबर्ग, रूस। होटल डोप्नेट सेन्ट पीटर्सबर्गमा अवस्थित छ, एक -0 मिनेटको ड्राइभबाट 300 मिनेटको ड्राइभ राज्य हर्मिटर्ड संग्रहालयबाट। लेनेक्सपो प्रदर्शनी जटिल होटल 3.1 किलोमिटर हो, र एडमिरली भवन .2.2 किलोमिटर टाढा छ।
कोठा सुविधाहरू: कोठाले शहर र नेभा नदीलाई बेवास्ता गर्यो। धुने मेसिन, एक पूर्ण शौचालय र एक हेयरर्डर को साथ एक निजी बाथरूम। थप रूपमा, पाहुनाहरूले डिशवशरलाई प्रयोग गर्न सक्छन्, माइक्रोवेभ, फ्रिज र केटलहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्।
पाहुनाहरूको लागि सेवाहरू: यसले नि: शुल्क Wi-fi र एक सीट क्षेत्रको साथ कोठा प्रदान गर्दछ। बेस्टी रेस्टुन्ट्रन्टले बिहानको खाजा, खाजा र बेलुकाको खाजाको लागि विविधताका साथ काम गर्दछ, र कोठामा खाना र पेय पदार्थहरूको वितरणको लागि पनि ठाउँ छ।
<< p> तपाईको होटलका पाहुनाहरू के हो: महान अपार्टमेन्ट, ओभन, डिशवार, केटवाशर, केटवाशर, केटवायर, केटवार, केटलरजेल। ठूलो स्टाइलिश स्नान, त्यहाँ एक नुहाउन को लागी एक स्नान छ (gel, शाम्ट, टोपी, दाँतहरु लाई ब्रश।) भुइँमा सुपर विन्डोज। टेपको स्टोरको नजिक, कार द्वारा minutes मिनेटको केन्द्रमा (हामी राती गयौं। ब्रिजहरू धेरै छिटो देखिन्थ्यो)। त्यहाँ पार्किंग छ। बिहानको खाजा पक्राउ गरिएको थिएन, तिनीहरू कोठामा हतारिए। धेरै खुसी! सिफारिश गर्नुहोस्!
विन्डोबाट सानो नेभामा राम्रो नेभामा सुन्दर दृश्य। नयाँ अपार्टमेन्ट सबै चीजहरूको आवश्यक, डिशवशर पनि सुसज्जित हुन्छ। धेरै रमाइलो आन्तरिक। अपार्टमेन्टको सानो आकारका लागि, सबै कुरा धेरै कार्यात्मक छ (हामीसँग 1 कोठा स्टुडियो थियो)। Riya र विनम्र कर्मचारी।
Zsdland र फिनल्याण्डको खाडी र फेद-व्यास गर्ने कोठाहरू र एक सानो भान्छाको पृष्ठभूमिमा र अन्य विकल्पहरूको न्यूनतम डिजाइन गर्दछ जुन सेन्ट पीटर्सबर्गमा अन्य विकल्पहरूको पृष्ठभूमि बनाउँदछ ।
<< p> डोनाना होटलमा सबै आरामदायी कोठा असामान्य शैलीमा सजाइएको छ। प्रत्येक कोठामा डेस्क, एक सुरक्षित र एक सपाट-स्क्रिन टिभी छ जुन उपग्रह च्यानलहरूको साथ। बाथरूमहरू चप्पल र बाथविशेषहरू संग सुसज्जित छन्।
अर्क्कोबलेन्ट रेस्टुरेन्टमा, जसले सडकको छुट्टै प्रवेशद्वारमा निम्त्याउँछ, इटालियन खन्याईले रेस्टुरेन्टको शेफले सिर्जना गरेको फ्यूजन विशेषताहरू। पाहुनाहरूले उपनिवेश पट्टीमा बैठकलाई आराम गर्न वा आयोजना गर्न सक्छ, जसले विभिन्न कार्यक्रमहरू राख्दछ, जीवित पियानो संगीत, फिल्ममूल्य पार्टीहरू र एनपोस्टिक मास्टर वर्ग सहित।
डोमिना होटेलमा एक सानो समुद्री सडकमा 2-मिनेट पैदल हिड्नको लागि 2-मिनेट पैदल यात्राको साथ 2-मिनेट पैदल यात्रा गरिएको छ जहाँ तपाईं मुर्दा रेलवे स्टेशनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। हर्मिटेशेड 1 किलोमिटर टाढा छ, र भल्कोभो एयरपोर्ट minutes0 मिनेट टाढा छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग विश्वको सबैभन्दा भ्रमण गरिएको शहरहरू मध्ये एक हो। यस अनौंठो समयमा पनि। चिनियाँ पर्यटकहरू अहिले त्यहाँ छैनन्, तर हामी हौं, अब जो उनीहरूको शहरमा बसिरहेका छैनन्। यस अवस्थामा, पत्रुसको यात्रा उत्तम विकल्प हो।
जे भए पनि तपाईंको मुड उठाउन्: सेटिंग्स, एक सुन्दर शहर परिवर्तन गर्नुहोस्। तर त्यो यात्राले तपाईंलाई अधिकतम आनन्द दिन्छ, तपाईंलाई होटेल सहित सबै कुरा मनपर्दछ। त्यसकारण, हामी सेन्ट पीटर्सबर्गमा सबै भन्दा राम्रो होटलहरू स collect ्कलन गर्यौं।
यस होटलमा हामी तपाईंलाई एक जोडी सेट गर्न सल्लाह दिन्छौं। अगस्टको अन्त्य सम्म, ज्योतियाई रोमान्टिक प्रस्ताव कार्य गर्दछ। यसले एड्डिंगलाई एड्डिंगको उत्तम कोठामा सेन्ट आइआसिकाको क्याथेड्रललाई हेर्दै आउँदो छ। जब पाहुनाहरू सुल्झाउने पाहुनाहरू वाद्य र कर्पोरेट डेस्ट्रो "डायना विशनेभा" को लागि पर्खिरहेका हुनेछन्।
तपाईं आफ्नो बालुवा पनि पत्रुसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, आर्टर्ड मारियटमा बसोबास गर्नुहोस्। यहाँ पशु आवास यहाँ अनुमति छ। बुकिंग गर्दा, हामी तपाईंलाई नदीलाई माथिल्लो भाग लिन कोठा लिन सल्लाह दिन्छौं। उसले मोहित गर्दछ।
एक जीत-जीत चयन एन्ड-जीत चयनलाई हेराई गर्दै, साथै सि sh ्गल स्टोनेक्शन, का AU SINTING र नयाँ हलत दूरीमा। र अझै - उत्कृष्ट सेवाको साथ, केवल यसो गर्ने अवधारणामा काम गर्नुहोस्। कुनै पनि तपाइँको अनुरोध बिजुली र उच्च श्रेणीमा प्रदर्शन गरिनेछ।
nevsky प्रत्याशामा महान स्थान केवल कोरिन्थीट होटल एक मात्र चीज होइन। यद्यपि यो अनौंठो उल्लेख छैन। Hande-मिनेट निपटान, रक्त सूट, रहन सूट र रूबेन्सन स्ट्रिटले अझै कुनै पनि होटलको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याएको छैन। होटेल XIX शताब्दीको एक गम्भिर अनुहार हो, त्यसैले प्रवेश गर्नु अघि, कम्तिमा उसको आँखा खस्छन्। र त्यसपछि तपाईं चार रेस्टुरेन्टहरू, बार र लबीमा कदर गर्नुहुनेछ, जहाँ ज्याज वाजोलारा शनिबार र शुक्रवारहरू देखा पर्दछन्।
सबैलाई सम्मिश्रणको बारेमा थाहा छ, तर संग्रहालयको आफ्नै आधिकारिक होटेल हो, उसले साना-पर्यटक सुनेको छ। यद्यपि यो अर्को संग्रहालय हो। लबीमा काँसाको मूर्तिकलाहरूको प्रतिलिपिहरू छन् र क्यानभासको प्रजननको झुण्ड्याउनुहोस्। र यहाँ जाडो दरबारको सजावटबाट प्रेरित अधिकारीहरू छन्।
सेन्ट पीटर्सबर्गमा, तपाईं वास्तुकार संरचनाहरू मात्र होइन, हर्मिटेशज बिरालाहरू, तर हर्मिटेज बिरालाहरू मात्र होइन। ती मध्ये धेरै केवल शहर र देशको जाल सम्पत्ति मात्र होइन, उनीहरूको शैली, पार्टीहरू, जीवन र संस्कृतिसँग पनि रचनात्मक अन्तर हो।
हामीले तपाईंको उत्तर शहरका सर्वश्रेष्ठ होटेलहरूको सूची, हाम्रो विचारमा, तपाईंको आरामदायक, आरामदायक र सौन्दर्य र सौन्दर्य सुखद रमाइलोको लागि तयार गरेका छौं।
प्रति रात 2-ओछ्यानको कोठाहरू 55 5500 रूबलहरूबाट। Apharghotel yusupov बगैचा टाढा छैन। सुरुमा उनले छात्रावासको रूपमा सोच्दै सोच्यो, तर निर्माणको क्रममा "केहि गलत भयो।" भित्री सरल छ, तर जटिल। कोठालाई प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको नाम भनिन्छ। यहाँ तपाई गगरिन, पातारि, गान्धी र अरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। होटलमा एक साझा ठूलो भोजन कोठा छ, र केही कोठाको आफ्नै सानो भान्छा हुन्छ।